Midawga Yurub Oo Ka Digay Faragelinta Shisheeye Ee Somalia, Kuna Baaqay In La Tixgeliyo Somaliland Si Ay Tusaale Ugu Noqoto Soomaaliyada Kale – Araweelo News Network (Archive)
Djibouti (ANN) Midawga Yurub ayaa ka digay faragelinta shisheeye ee arrimaha Somalia, isla markaana aan loo baahnayn in Al-shabaab lagu khaldo muslimiinta kale ee qunyar socodka ah. Mr.Louis Michel oo ah u qaybsanihii arrimaha dibadda ee ururka Midowga Yurub – xiligana ah
mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka Midowga Yurub ayaa ka digay faragelinta caalamiga ah ee lagu hayo Soomaaliya, isagoo sheegay inay kasii dari karaan xaaladda hadda jirta Somalia.
Mudane Louis wuxuu sidaa ku sheegay wareysi uu siiyay VOA-da isagoo ku sugan dalka Djibouti, wuxuuna sheegay inay jiraan arrimo badan oo la buunbuuniyo si ay u sahlanaato in faragelin lagu sameeyo Soomaaliya, taas oo ah sababta ka dambeysa deggenaasho la’aanta Soomaaliya iyo ka dayrinta xaga nabada ee xaalada murugsan.
“Faragelinta shisheeye waa dhibta xoogga badan ee ku habsatay Soomaaliya mana doonayo inaan kusii dheeraado ka hadalka arrintan,waxaa jira arrimo badan oo la buunbuuniyo si loo farageliyo Soomaaliya, waxaana caddeynayaa inay jiraan dareen xun oo la doonayo in lagu dhibaateeyo Soomaaliya,” sidaasi ayuu yidhi Louis Michel.
Sidoo kale Louis wuxuu sheegay inaan loo baahnayn in Al-Shabaab lagu qaldo muslimiinta qun-yar socodka ah ee Soomaaliya, isagoo sheegay in lala shaqeeyo, wuxuuna xusay in aanay jirin guul laga gaarayo daganaasho la’aanta Soomaaliya haddii aan sidaas la sameyn oon talaabo kasta laga fiirsan.
Waxaa uu intaasi ku dharay Mudane Louis isaga oo hadalkiisii sii wata “Waxaan u maleynayaa in Soomaaliya lagu dajin karo iyadoo la qabto shirweyne ballaaran oo lagu casuumo dadka ay sida rasmiga ah uga go’do talada, si ay uga hadlaan sidii lagu xallin lahaa dhibaatada dalkooda ka jirta,”.
Louis sidoo kale, wuxuu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay gacan siiyaan DKMG ah ee Soomaaliya oo muujinaysa niyad wanaagsan inta itaalkeeda ahna wax qabanaysa.
Mudane Louis mar uu ka hadlay budhcadbadeedda wuxuu sheegay inay wanaagsan tahay in ciidammo badan la geeyo biyaha Soomaaliya si looga hortago falalka budhcadbadeednimo, balse la ogaado in dhinaca kale la horjoogsanayo kalluumeysi ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaaliyeed oo kala soo baxa nolol maalmoodkooda dhinaca badda iyo kaluumaysiga.
“Uma sharciyeyna budhcadbadeedda dhibaatada wadaan, balse waxaa habboon in la ogaado in falalkaas ay saboolnimadu sababayso, sidaa daraadeena loo baahan yahay in la helo qorshe mideysan oo lagu caawinayo kalluumeysatada,”.
Geesta kale, wuxuu ka hadlay arrimaha Somaliland isagoo yidhi: “Haddii aan ka hadlo Somaliland waxaa cad inuu ka jiro maamul iyo nabad, waxaa waajib ah in la tixgeliyo nabadda ka hirgashay Somaliland, waayo waxaa laga yabaa inay tusaale u noqoto Soomaaliya inteeda kale. Waxayna ila tahay in markii intaas la ogaado la helayo Soomaaliya sidii hore ah.”
Gabagabadii wuxuu sheegay in maamullada ka jira Soomaaliya ay noqdaan tiirarka ay ku taagnaanayso Soomaaliya marka ay dib u dhisanto, isagoo sheegay nabadda Soomaaliya inay ku xidhan tahay iyadoo si wadajir ah loo wada shaqeeyo oo aan loo kala hadhin.
Hadalka mudane Louis ayaa kusoo beegmay maalin ka dib markii ay Ciidamada dalka Ethiopia galaan gudaha Somalia, iyagoo gacanta ku dhigay magaalada mihiimka ah ee Beledweyn. Kadib dagaal qadhaadh oo dhawr saacadood ku dhexmarayay halkaa Al-shabaab. iyadoo ay horaantii Octoobartii lasoo dhaafay 2011, ciidamada dalka Kenya iyaguna soo galeen koonfurta Somalia, halkaas oo ay dagaalo ku dhexmareen Al-shabaab, isla markaana ay diyaaradaha dagaalka ee Kenya duqaymo ay dad shacab ahi ku dhinteen ka fuliyeen magaalooyinka Koonfurta Somalia, iyadoo kooxda Al-shabaab balan ku qaaday inay weeraro ka samayn donaan dalka Kenya, halkaas oo ay qaraxyo xidhiidh ah ka sameeyeen labadii bilood ee u danbeeyay. iyagoo dhinaca kalena ku hanjabay inay la dagaalamayaan cid kasta oo soo gasha gudaha dhulka Somalia.
Published January 1, 2012 By info
Shirka Taleex Miisaanka Siyaasiyiinta Ka Qaybgashay, Dareennada Siyaasadeed Ee Ku Xeeran, Saadaasha Natiida Iyo Mawqifka Xukuumadda Somaliland